Wareegtada Camey ragaadinta Gaas mise rafasho siyaasadeed? W/Q Khadar Awl Ismail
Tuesday 4th December 2018 11:27:14 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Kursiga dagaalka ba'an ka dhacay oo Gaas iyo Camey ku hardameen waxaa kamid ah xildhibaanka jifadda Madaxweyne Camey oo 5 tii sano ee u danbeeyey uu ku fadhiyey Xil Cumar X Cabdi Akbe. Eng Camey wuxuu si weyn ugu dadaaley inuu kursiga kusoo laabto Xil Cumar taasoo uu ku guuldaraystey.
Qodobka labaad ee dagaalka ba'an ka dhashay oo markale Gaas iyo Camey isku maan dhaafeen ayaa ah magacaabista xubinta gudiga xalinta khilaafaadka u gelaysa gobolka Cayn kaaso Madaxweyne Gaas u magacaabay Huseen Cali Xasan (Somali) halka Eng Camey soo jeediyey in laga dhigo laba nin oo kale midkood.
Sidaas darteed majirto awood sharci oo maanta uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaankii 4'aad ee Puntland.
Xukuumadu Miyay Hagratay Gobolka Togdheer Mise Way Tahli Wayday Inay Wax U Qabato
Wasiirka Gaashandhiga Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Wefti Itoobiya Ka Socda [Muuqaal]
TACSI KA TIMID AGAASIMAHA GUUD EE BAANKA DHEXE AXMED CARWO EE GEERIDA MADAXWEYNIHII HORE EE GALMUDUD MUDANE MAXAMED WARS
[Akhriso:-] Gaaski ugu badnaa abid oo laga helay Deegaanka Soomaalida Itoobiya